40 + Qalabka Cabbiraadda si loo hagaajiyo Suuqgeyntaada internetka
Axad, Agoosto 21, 2011 Khamiista, Oktoobar 27, 2011 Douglas Karr
Horaantii bishaan waxaan waqti qurux badan ku qaatay bandhig Blog -ka Indiana 2011. Tani waa dhacdo xiiso leh maxaa yeelay waa tan ugu weyn gobolka waxaanan helayaa xoogaa xiiso leh oo tijaabinaya waxyaabo cusub. Bandhigani wuxuu si gaar ah diirada u saaray waxa suuqleyda ka maqan iyagoo kaliya isticmaalaya xirmooyinkooda 'Analytics' si ay u horumariyaan dadaalkooda suuq geynta internetka.
Waxqabadka mashiinka raadinta, waxqabadka warbaahinta bulshada, aqoonsashada tilmaamaha iyo fahamka dabeecadaha isticmaalaha ee bogga ama bogga ayaa ka maqan Falanqaynta. Kaabayaasha sida Google Analytics, feker ahaanteyda, waa inay noqdaan tiro yar oo ka mid ah qalabka suuqleyda marka ay tahay falanqaynta iyo fulinta xeeladaha suuq geynta isku dhafan. Waa tan soo-jeedinta oo ay weheliso kala-duwanaanta qalabka kala duwan iyo fikradaha kala duwan ee ay bixiyaan.
Aniga oo aan iib aheyn y waa sababta aan u ahay taageere weyn Webtrends. Markii aan la kulmay dhowr sano ka hor, way ogaayeen waxa ka socda warshadaha. Dhinac ka mid ah horumarin ballaaran oo ay hadda ku jiraan Analytics madal, waxay si xoog leh u ballaariyeen waxqabadka goobta ka baxsan. Webtrends Social, Webtrends Apps, Webtrends Mobile, Webtrends Ads… Segmentation, Optimization, Real-time analytics team kooxdu waxay siineysaa qalab kala duwan oo si habsami leh u dhexgaleysa si ay ugu sahlanaato Suuqleyda inay soosaaraan istiraatiijiyad waxqabad.
Tags: calaamadeynta bulshada
Maxaa Dadka Ka careysiiya E-mayllada
Aug 22, 2011 at 3: 49 AM
Waa boodbood weyn oo soo bandhigid ah waxayna ahayd bandhig aad u wanaagsan Blog Indiana. Waxay umuuqataa inaan aad ugu dhow nahay sida aan uga fikirno falanqaynta iyo cabirka.
Oh iyo raali ahow in wax yar oo xirmo ah aysan shaqeyn. Waxaan u badan tahay inaanan weligay ku noolaan doonin soo jeedintaas.